Dhalinyaro Araga Naafo Ka Ah Oo Safar Ku Maraaya Gobolada Galbeedka Dalka Ayaa Lagu Soo Dhaweeyay Degmada Gabiley - Xogside-news
Home WARARKA DALKA SOMALILAND Dhalinyaro Araga Naafo Ka Ah Oo Safar Ku Maraaya Gobolada Galbeedka Dalka...
Dhalinyaro Araga Naafo Ka Ah Oo Safar Ku Maraaya Gobolada Galbeedka Dalka Ayaa Lagu Soo Dhaweeyay Degmada Gabiley
Qaar Ka Mida Dhalinyarada Araga Naafada Ka Ah Oo Safar Ku Maraaya Gobolada Galbeedka Dalka Ayaa Lagu Soo Dhaweeyay Degmada Gabiley, dhalinyan araga ka naafada ah oo ka kooban 22 xubnood, iyagoo uga sii gudbi doona magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.
Safarkan oo loo bixiyay safarka rajo gelinta dadka araga naafada ka ah ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibada Somaliland, siiba xafiiska qurbejoogta.
Dhankodooona fihiima maxamed aar iyo canab maxamed cali (canab riyo raac) oo ka mida hablaha qurba joogta Somaliland ee dalka Maraykanka ayaa wasaaradda arrimaha dibada Somaliland uga mahadeceliyay siday u u dhiirigelinayo dadka araga naafada ka ah iyo wada shaqaynta dhaw ee ay la leedahay qurba-joogta reer Somaliland ee ku nool wadamada dibada. Geestoodana qaar ka mida xubnahaas araga naafada ka ah ee gobolada dalka qaarkood socdaalka dhiiregelinta dadka araga naafada ka ah ku maraayay ayaa u mahadceliyay wasaaradda arrimaha dibada Somaliland iyo qurba joogta Somaliland ee socdaalkaas sida wada jirka ah iskaga kaashaday, waxaanay xuseen in tallaabadaasi tahay mid dhiirigelin doonta dadka araga naafada ka ah.
Ugu dambayn Agaasimaha waaxda xidhiidhka qurba joogta Somaliland Xasan Af-gaab ayaa wuxuu u mahadceliyay qaar ka mida hablaha qurba-joogta ee Somaliland, kuwaas oo kaalin ku lahaa sidii uu u qabsoomi lahaa socdaalkaas ay xubnahaas araga naafada ka ahi ku marayaan qaar ka mida gobolda dalka.
Previous articleCiidanka Dab-demiska Burco oo soo badbaadiyay Gabadh Musqul la duntay.
Next articleQisada: Adoonkii Sayladda La Keenay Ee Boqorka Noqday!